10 खराब प्रस्तुतीकरण र तिनीहरूको उपचार
श्रोतालाई कसरी खोल्न र 10 पछाडि तिनीहरूलाई प्राप्त गर्न
by वेंडी रसेल
Bad Presentation Techniques 101 मा स्वागत छ। लगभग हरेक गरी खराब प्रस्तुतीकरण गरी गरीब प्रविधि र तयार पारिएको उपस्थितिका साथ बसेको छ। त्यहाँ परिदृश्यहरू छन् जहाँ प्रस्तुतकर्ताहरूले प्रस्तुतिबाट verbatim पढ्छन्, उनीहरूको भाषण मार्फत बेमेल, वा तिनीहरूको PowerPoint मा धेरै धेरै एनीमेशनहरू प्रयोग गर्नुहोस्। तल विभिन्न प्रस्तुतीकरणहरू छन् जुन सम्भव छ यो कसरी सुधार गर्न समाधानको साथ।
उपकरण काम गरिरहेको छैन
धेरैले परिदृश्यलाई कहाँ परिदृश्य भएको परिदृश्यको अनुभव गरेका छन्, र प्रेन्टर सेट गरिएको छ र प्रस्तुतीकरण सुरु गर्न तयार छ। अचानक, प्रोजेक्टर काम गर्दैन। स्वाभाविक रूप देखि, प्रेन्सेन्टले सुरु गर्नु अघि सबै उपकरणहरू जाँच गर्न कोसिस गरेन।
यो प्रस्तुतीकरण प्रविधिको सही गर्न, यो प्रस्तावित छ कि प्रस्तुतकर्ता सबै यन्त्रहरू जाँच गर्नुहोस् र प्रदान गरिएको प्रोजेक्टर प्रयोग गरी उनीहरूको प्रस्तुतीकरण लामो समयसम्म प्रस्तुत गर्न अघि। एक प्रोजेक्टर बल्ब जस्तै अतिरिक्त उपकरणहरू चाहिन्छ एक राम्रो विचार हो, एक टेक्नोलियनको लागि संपर्कको बिन्दु संग यदि चीजहरू प्रिन्टरको नियन्त्रण भन्दा बाहिर हुन्छ। यदि सम्भव छ भने, प्रस्तुतकर्ताहरूले कोठामा प्रकाश जाँच गर्न सक्छन् जुन उनीहरूको प्रस्तुतीकरणमा रोलिट भन्दा पहिले, विशेष गरी उनीहरूले उनीहरूको भाषणमा आवश्यक रोशनीलाई मस्त गर्न सक्छन्।
प्रस्तुतिहरूले मात्र उनीहरूको प्रस्तुतीकरणको विषयवस्तुको सम्झना गर्न सक्दछन्। यस परिदृश्यमा, दर्शकहरूको कुनै पनि प्रश्न र आतंक हुन सक्दछ। किनकि प्रेन्सेन्टले प्रश्नहरूको लागि तयारी गरेको छैन, सबै तिनीहरू विषयको बारे जान्दछन् कि पहिले नै स्लाइडहरूमा लेखिएको छ।
यस अवस्थालाई सुधार गर्न, प्रस्तुतकर्ताहरूलाई उनीहरूको सामग्री यति राम्रोसँग थाहा हुनुपर्छ कि तिनीहरूले सजिलैसँग विद्युत् वृद्धि जस्ता प्रस्तुतीकरण गर्न सक्दछन् PowerPoint। प्रस्तुतिकर्ताहरूले कुञ्जी शब्दहरू र वाक्यांशहरू प्रयोग गर्न सक्छन् जुन केवल आवश्यक जानकारी समावेश गर्दछ, दर्शकहरूलाई ध्यान केन्द्रित गर्न र प्रिन्टरमा रुचि राख्ने। अन्तमा, स्पिकरहरू प्रश्नहरूको लागि पूर्णतया तयारी हुनुपर्छ र जवाफहरू थाहा पाउनुहोस् वा दर्शकहरूको सदस्यलाई कसरी निर्देशित गर्ने विचार छ।
जानकारी अन्तर्गत उल्लेखित, उपस्थितकर्ताहरूले आफैंलाई धेरै ठाँउको बारेमा जान्न सक्दछन् कि उनी सबै ठाउँमा जम्मा गर्छन्। यसले एउटा स्थिति सिर्जना गर्दछ जहाँ दर्शकहरूले प्रस्तुतीकरणको थ्रेड कसरी पछ्याउने भनेर विचार गर्दैन किनभने त्यहाँ कुनै पनि छैन।
यस परिस्थितिलाई ठीक पार्नको लागि कोसे सिद्धान्त प्रयोग गर्न को लागी तरीका छ, जुन "यसलाई सरल रमाइलो राख्नुहोस्"। प्रस्तुतीकरणको डिजाइन गर्दा, प्रस्तुतकर्ताहरू उनीहरूको विषयको बारेमा प्रायः तीन वा चार बिन्दुहरूमा पर्न सक्छन्। त्यसपछि, उपस्थितकर्ताहरूले जानकारीमा विस्तार गर्न सक्छन् ताकि दर्शकहरू यसलाई अवशोषित गर्ने सम्भव छ र मुख्य बिन्दुहरू चालु बनाउँदछ।
स्क्रिनबाट सिधा पढ्ने
एक सेटिङको कल्पना गर्नुहोस् जहाँ एक दर्शकले सदस्यले आफ्नो हात बढाउँछन् र उल्लेख गर्दछ कि त्यो स्लाइडहरू पढ्न सक्दैन। यस अवस्थामा, प्रिन्टरले कृतज्ञतापूर्वक उसलाई बताउन सक्छ कि उनीहरूलाई सिधा स्लाइडहरू पढ्न सक्नेछन्। प्रेन्सेन्टले गर्दा त्यसो गर्न सकिएको छ, तिनीहरू स्क्रिनमा हेर्छन् र प्रत्येक स्लाइडहरू तिनीहरूको भाषणको पाठमा भरिएको छ। समस्या यहाँ छ कि यदि स्लाइडहरू दर्शकहरूको सदस्यहरूको लागि सबै जानकारी प्रदान गर्दछ भने प्रिन्सेन्ट आवश्यक छैन।
सामग्री सरल पार्दै यहाँ कुञ्जी हो। प्रस्तुतिकरणले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सूचना स्लाइडहरूको शीर्ष नजिकको पछाडि पछाडि पढ्न सजिलो राख्न सक्छ। तिनीहरू पनि एक विषय क्षेत्रमा फोकस गर्न सक्छन् र प्रति स्लाइडमा चार गोलहरू भन्दा बढी प्रयोग गर्दैनन्। यो उपस्थितकर्ताहरूको लागि दर्शकहरूलाई बोल्न महत्त्वपूर्ण छ, स्क्रिनमा छैन।
स्क्रैस सामग्रीका लागि प्रतिस्थापनमा भिजुअल एड्स प्रयोग गर्दै
प्रस्तुतिकर्ताहरूले यो थाहा पाएको छ कि कसैले पनि उनीहरूको विषयमा धेरै अनुसन्धान गरेन भने उनीहरूले धेरै भिजुअल एड्सहरू थप्छन् जस्तै फोटोहरू, जटिल ग्राफहरू, र अन्य चित्रहरू।
यो गल्ति ठूलो छ। प्रस्तुतिहरूले प्रस्तुतिहरू सिर्जना गर्न आवश्यक छ जुन राम्रो तरिकाले अनुसन्धान सामाग्री र विषयहरू समावेश गर्दछ जुन श्रोताहरू खोज्दैछन्। इष्टप्रिन्ट पोइन्टहरू साँचो सामग्रीसँग अनुगमन गर्न राम्रो ढाँचा हो, र फोटो, चार्टहरू, र रेखाचित्रहरू जस्तै दृश्य एल्डरहरू प्रदर्शन घरको मुख्य बिन्दुहरू चलाउन सामग्रीको अतिरिक्त प्रयोग गर्नुपर्छ। सबै पछि, भिजुअल एसिड सामाग्रीमा राम्रो ब्रेक थप्न तर मौखिक प्रस्तुति बढाउनको लागि सही रूपमा प्रयोग गर्नु पर्छ।
स्लाइड्हरूमा फन्ट सेट गर्नुहोस् धेरै सानो
सानो लिपि प्रकार फन्टहरू राम्रो लाग्न सक्छ जब दर्शक दर्शकहरू मात्र मात्र इन्चबाट मनिटरबाट टाढा बस्छन्। यद्यपि, उपस्थित व्यक्तिहरूले दर्शकहरूलाई सदस्यहरूलाई खराब दृष्टिमा विचार गर्दैनन्, वा जो स्क्रिनबाट एक सभ्य दूरीमा बसिरहेका छन्, ती दर्शकहरूलाई दर्शकहरू पढ्ने सम्भावना भएका दर्शकहरूलाई हराउनेछन्।
यो सर्वोत्तम को लागी एरिड वा टाइम्स न्यू रोमन जस्तै सजिलो-पढ्न फन्टहरूमा स्टिक गर्न को लागी । प्रस्तुतिकरणले लिपि प्रकारको फन्टहरू जोगिनैपर्छ जुन सामान्य रूपमा स्क्रिनमा पढ्न गाह्रो हुन्छ। यो पनि प्रस्तुतकर्ताहरूको लागि दुई फरक फन्टहरू भन्दा बढी प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको छ - शीर्षकहरू र अन्य सामग्रीको लागि। अन्ततः, उपस्थितकर्ताहरूले 30 पीटी फन्ट भन्दा कम्तिमा प्रयोग गर्नुपर्दछ ताकि कोठाको पछाडिका मानिसहरू सजिलै पढ्न सक्दछन्।
गरिब वा जटिल डिजाइन टेम्प्लेट छनौट गर्नुहोस्
प्रस्तुतिकर्ताहरूले कहिलेकाहीँ उनीहरूको सुन्नुमा आधारित प्रस्तुतीकरण गर्दछ। उदाहरणको लागि, एक प्रिन्टरको लागी जसले सुनेको थियो कि नीलो डिजाइन डिजाइन टेम्प्लेट वा डिज़ाइन विषयवस्तुको लागि राम्रो रंग थियो। तिनीहरूले इन्टरनेटमा राम्रो टेम्प्लेट फेला पारे र यसको लागि गए। दुर्भाग्यवश, अन्त मा, प्रस्तुतीकरण एक संदर्भ को बारे मा समाप्त हुन्छ जुन दृश्य संग मेल नहीं खाता र दृश्य प्रस्तुतीकरण को महसुस गर्दछ।
यो परिदृश्य सजिलै निश्चित हुन सक्छ जब प्रस्तुतकर्ताहरूलाई दर्शक टेम्प्लेट छनोट गर्ने निर्णय गर्दछ जुन दर्शकहरूको लागि उपयुक्त छ। एक स्वच्छ, सीधा लेआउट व्यवसाय प्रस्तुतीकरणको लागि उत्तम हो, उदाहरणका लागि, युवा बालबालिकाले प्रस्तुतीकरणका लागि राम्रो प्रतिक्रिया दिन्छ जुन रंग भरिएको छ र विभिन्न प्रकारका आकारहरू समावेश गर्दछ ।
धेरै धेरै स्लाइडहरू सहित
केही उपस्थितहरू उनीहरूको स्लाइड गणनाको साथ ओभरबोर्डमा जान्छन्। उदाहरणका लागि, प्रेन्टरको कल्पना गर्नुहोस् जसले भर्खरै हालैमा एकदम राम्रो छुट्टी क्रूजमा गए र उनीहरूको स्लाइडमा सबै 500 समुद्र तट तस्बिरहरू समावेश गर्यो। धेरै धेरै स्लाइडहरू, वा अति धेरै व्यक्तिगत सामग्री प्रयोग गर्ने प्रस्तुतिहरू कोठामा स्वरहरू सुन्न बाध्य छन्।
प्रस्तुतिकर्ताहरूले यो सुनिश्चित गर्नु पर्छ कि दर्शकहरूले कम्तिमा स्लाइडहरूको संख्या राखेर ध्यान केन्द्रित रहन्छन्। यो 10 देखि 12 स्लाइडहरू प्रयोग गर्न सिफारिस गरिन्छ। तस्बिर रिलिजको लागि केही रियायतहरू सिर्जना गर्न सक्दछ किनभने अधिकांश तस्विरहरू केवल एक छोटो स्क्रिनमा हुनेछ, र यसले कसरी दर्शकहरूलाई महसुस गर्ने र जवाफ दिन्छ भन्ने आधारमा निर्णय कलको आवश्यकता पर्दछ।
एनिमेशनको साथ सन्देश खोल्नुहोस्
प्रस्तुतिकर्ताहरूले सबैलाई प्रभाव पार्नको साथ धेरै धेरै एनीमेशन र ध्वनि प्रयोग गर्दा उनीहरूको प्रस्तुतिको फोकस बिर्साउन सक्दछन्। यो अन्तमा अधिकांश समय काम गर्न असफल भयो, किनकि श्रोताले कहाँ थाहा छैन, र प्रस्तुतिको सन्देश गुमाउनेछ।
जबकि एनिमेशन र ध्वनि जो राम्रो तरिकाले प्रयोग गरिन्छ रुचि को बढावा दिन सक्छ, यो प्रस्तुतकर्ताहरु को लागि एक न्यूनतम गर्न को लागी महत्वपूर्ण छ। अन्यथा, यो फ्लेयरले दर्शकहरूलाई विचलित गर्नेछ। प्रस्तुतिहरूले उनीहरूको प्रस्तुतीकरण "कम छ अधिक" दर्शनसँग डिजाइन गर्न सक्छ किनकि दर्शकहरूले एनीमेशन अधिभारबाट पीडित छैनन् ।
असामान्य रङ्ग संयोजन बाहिर
केहि उपस्थितकर्ताहरूलाई असामान्य रङ्ग संयोजनहरू सँगै प्रेम गर्नुहुन्छ, तर पावरपोइन्ट प्रस्तुति तिनीहरूलाई प्रयोग गर्ने समय होइन। उदाहरणको लागि, सुन्तला र नीलो संयोजन दर्शकहरूलाई असंतोषजनक छ र त्यहाँ हुन सक्ने व्यक्ति हुन सक्छ जुन रंग र अन्धाकारको कारण रातो र हरियो हेर्न सक्दैन।
प्रस्तुतिकरणहरूले पाठलाई सजिलै पढ्न सजिलो बनाउन पृष्ठभूमिसँग राम्रो विपरीत प्रयोग गर्नुपर्छ। यहाँ केही सुझावहरू छन्:
हल्का पृष्ठभूमिमा गाढा पाठ राम्रो छ तर सेतो पृष्ठभूमिबाट बच्नुहोस्। आँखामा सजिलो हुनेछ बेज वा अर्को हल्का रङ प्रयोग गरेर यसलाई टोन गर्नुहोस्। गाढा पृष्ठभूमि धेरै प्रभावकारी छन्, तर पाठलाई सजिलो पढ्नको लागि हल्का रङ्ग बनाउनुहोस्।
ढाँचा वा बनावट गरिएको पृष्ठभूमिमा पाठ पढ्न गाह्रो बनाउन।
रंग योजना लगातार राख्नुहोस्।
एक राम्रो प्रेन्सेन्टर हुन, प्रस्तुतकर्ताहरूलाई दर्शकहरूसँग संलग्न हुन र तिनीहरूको विषय जान्न आवश्यक छ। प्रस्तुतिकरणले अंततः प्रस्तुतिको संक्षिप्त राख्नु पर्छ र केवल सान्दर्भिक जानकारी समावेश गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई इलेक्ट्रोनिक वृद्धिको प्रयोग गर्नु पर्छ, जस्तै PowerPoint, उनीहरूको प्रस्तुतीकरणको साथमा अंकहरूलाई बलियो बनाउनको लागि , क्रचको रूपमा होइन। प्रस्तुतिकरणहरूले ध्यान दिनुपर्छ कि स्लाइड शो प्रस्तुतीकरण होइन - तिनीहरू प्रस्तुति हुन्।
PowerPoint 2007 मा मुद्रण
योजना प्रभावकारी प्रस्तुति सिर्जना गर्न कुञ्जी हो
ब्ल्याकपोष्ट 2010 स्लाइड शोमा रङ गर्न कालो र सेतो चित्रहरू परिवर्तन गर्नुहोस्
ध्वनि वा सङ्गीतको साथ PowerPoint 2010 अडियो समस्याहरू
त्यही समयमा दुई पावरपोष्ट प्रस्तुतिकरणहरू हेर्नुहोस्
संगीत थप्न र विन्डोज मूवी निर्माता मा आवाज
PowerPoint 2010 मा डिजाइन विषयवस्तुहरू
Common PowerPoint Problems Solving for Tips
आईआईआरसीको अर्थ भनेको के हो?
जहाँ GMAP मेल खाताको लागी IMAP सेटिङहरू फेला पार्न सिक्नुहोस्
थन्डरबर्ड वा नेटस्केपमा एक मेलिङ सूची सिर्जना गर्नुहोस्
9 चेक आउट गर्न निको सोशल नेटवर्किङ साइटहरू
तपाईंको वेबसाइटमा छवि कसरी लिंक गर्ने?
मोजिला थन्डरबर्ड मेलिङ सूचीको साथ ईमेल पठाउँदै
सर्वश्रेष्ठ मार्च पागलपन आईफोन अनुप्रयोगहरू
2018 मा खरीद गर्न9उत्तम कम्प्यूटर कीबोर्ड
"द सिम 2" प्लेस्टेशन2धोखा कोडहरू
एन्ड्रोइडका लागि5उत्तम पोकमोन क्लोन्स
तपाईंको म्याकबुकमा अधिक ब्याट्री लाइभ प्राप्त गर्दै
OKI डेटाको एकल-प्रकार्य लेजर-क्लास मुद्रक
RPM प्याकेजहरू YUM प्रयोग गरेर कसरी स्थापना गर्ने
एकल तत्वमा बहु CSS कक्षाहरू कसरी प्रयोग गर्ने
गुगल पात्रोमा क्यालेन्डर साझेदारी गर्ने
स्थानीय नेटवर्कमा सञ्जाल हार्डवेयर आइपी ठेगानाहरू कसरी पहिचान गर्ने?
Outlook.com जादू परीक्षकलाई के भयो?
एचटीएमएल सम्पादकहरू र वेब पेज सम्पादकहरू
सम्मेलन कलहरू तपाईंको कलहरू सुधार गर्न सुझावहरू
फोन आकृति पालन गर्नुहोस्:4नियमहरू एक प्रारम्भिक आईएम वा पाठ पठाउँदा
कसरी इको जडान गर्नुहोस् र एलेक्सलाई Wi-Fi मा जडान गर्नुहोस्